VB Insight: Ndị nyocha na ọnụ, Akụkọ Real-World | Martech Zone
Bryant Tutterow bụ onye na-ere ahịa nke duru ọtụtụ ụlọ ọrụ nnukwu ụlọ ọrụ na usoro ha. Ọ na-achọsi ike na nkwalite ọdịnaya, gụnyere mgbasa ozi mgbasa ozi, ebe ụlọ ọrụ ọ na-arụ ọrụ na-enweta nsonaazụ pụrụ iche n'agbanyeghị ihe ọtụtụ ndị nyocha na-agagharị. Obi dị anyị ezigbo ụtọ ịkpọsa na Bryant na-enyere aka DK New Media na ịgbasa ọ nkwalite ike, oke!
Otu n'ime ọrụ ndị anyị nyere Bryant ma gaa n'ihu na-enye ndị ahịa anyị bụ onye na-ahụ maka ndị na-ere ahịa. Imirikiti ụlọ ọrụ anaghị enwe oge ma ọ bụ ihe onwunwe iji họrọ ihe ngwọta kwesịrị ekwesị na ụlọ ọrụ teknụzụ ahịa. Na itinye onu ogugu isii ma obu asaa n’ime ntinye, mmekorita na ojiji nke ikpo okwu nke na adighi nma nwere ike ime ka ulo oru nde mmadu ma obu nke ka njo ju ha onu site n’inwe onu na njide.
Mkpesa Bryant na ụlọ ọrụ ahụ bụ na ndị nyocha anaghị emetụ aka na akụkọ ha dị oke ọnụ iji kwado mmefu ahụ. Ihe atụ bụ akụkọ na-adịbeghị anya nke kwuru Sdị na-eri ego na Facebook na Twitter - akụkọ $ 499 sitere na Forrester na-atụpụta atụmatụ ọ bụla Bryant jiri mee ihe n'ụzọ gara nke ọma iji mee ka ọchịchọ na uru maka ụlọ ọrụ ọ na-arụ ọrụ site na ewu mmekọrịta mmadụ na ibe ya online.
Bryant ugbu a nwere ihe ngwọta na VB nghọta!
Ewebata VB Insight
Site na mmekọrịta dị ukwuu na Ian Cleary kwuru, anyị jikọtara ya na Stewart Rogers na VentureBeat. Stewart Rogers bụ Director, Teknụzụ Azụmaahịa na VB Insight, ngwaahịa nke VentureBeat, na-enyere aka wee mepụta nyocha na ụlọ ọrụ martech dum yana yana ndị edemede na-arụ ọrụ iji wepụta ọmụmụ ihe ha na akụkọ ha. VB nghọta bụ nchịkọta na-enweghị atụ ma dị ọnụ ala nke akụkọ ụlọ ọrụ ụwa n'ezie, nke ndị na-eme ọrụ n'ezie na-edebanye na netwọkụ buru ibu nke VB maka nyocha mbụ.
Stewart kpọkwara m ka m bụrụ onye nyocha! Amalitere m ide akụkọ mbụ nke onye nyocha anyị VB nghọta na steeti ụlọ ọrụ njikarịcha njin ọchụchọ, edere maka ndị isi ahịa nke ụlọ ọrụ ụlọ ọrụ. Anyị nwere olile anya na anyị mechara ya na mbido ọnwa Jenụwarị!
Zụta Akuko mbụ gị maka 50% Gbanyụọ!
Stewart edekwara n'oge na-adịbeghị anya akụkọ dị ịtụnanya banyere mmetụta nke mgbasa ozi mmekọrịta na ọrụ ndị ahịa na ụfọdụ stats na-emenye ụjọ na nchịkwa mmadụ nke ndị na-eme mkpesa na ntanetị yana otu ndị ahịa si eji mgbasa ozi mmekọrịta iji melite ọrụ ndị ahịa ka ha na-ere ahịa ha nke ọma:
Ihe eji eme ihe di iche iche: Ighaghari mkpesa nke ndi mmadu na ndi mmadu.
Martech Zone ndị na-agụ nwere ike pịa site na ihe oyiyi dị n'okpuru ebe a iji zụta akụkọ ahụ maka 50% kwụsịrị na ọnụahịa ndepụta ya!
[su_button url = ”http://bit.ly/audpcs50 ″ target =” blank ”color =” # ffffff ”] Zụta Nkwupụta maka 50% Gbanyụọ! [/ su_button]
Tags: nyochanyocha na-akọonye nkuzi bryantNwokeuzo doro anyastewart rogersvbobibia